TAILS 3.14: pamwe nekuvandudzwa kweazvino Intel kutambura | Linux Vakapindwa muropa
Miswe ndeye GNU / Linux distro inonyatso kuzivikanwa kune vese kubvira misoro yese nezve espionage, Edward Snowden, nezvimwe vatanga kuva venyama. Iyo inoshanda system yakanyatsogadzirirwa avo vanoda kuvanzika uye kusazivikanwa. Vagadziri veiyi Rarama vakafunga zvakawanda nezve kuchengetedzeka kwesystem ino, uye nekutenda kune iro basa rinokutendera iwe kusefa mambure pasina kusiya zvakanyanya mwero.
Iye zvino tava neshanduro yakagadzirira Miswe 3.14, kuburitswa kutsva kwaunogona kuwana mu zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti. Iyo Amnesic Incognito Live System kana TAILS, zvinoita kuti zvive nyore kwatiri, pamwe nedzimwe sarudzo kubva kuhungano yandakasiya kuti ndikwanise kusarudza iyo yekushandisa iyo yatiri kuyedza kurodha pasi: Windows, MacOS neLinux.
Iwe unoziva, sezvatakadzokorora pane dzimwe nguva muLxA, kuti Miswe yakavakirwa paDebian uye kuti, ivo vanoti, ndiyo sisitimu yekushandisa inoshandiswa neyaimbove mumiriri weiyo NSA Edward Snowden kugara "zvakavanzwa" uri online. Ikozvino neshanduro 3.14 kumwe kwekupedzisira kusagadzikana kunowanikwa muIntel microprocessors kwadzikiswa. Kunyanya, yakawedzera zvigamba zveIntel MDS, iyo yakakosha yekuchengetedza kukanganisa iyo yanga iri yekupedzisira kuwanikwa parizvino ...
Asi pamwero watiri kuenda uye tichifunga panorama, zvimwe zvichauya mumashure MDS (Microarchitectural Data Sampling). Kukuchengetedza kubva pakurwiswa Kudonha, RIDL, ZombieLoad iyo inotora mukana weIntel HT (HyperThreading), unofanirwa kuremadza iyi SMT basa rako system, chimwe chinhu chinoderedza mashandiro.
Kunze kwechigamba ichocho, iyo kernel yakawedzerwawo Linux Linux LTS, azvino firmware mapakeji, mamwe ekushandisa mapakeji akagadziridzwa senge TOR Bhurawuza 8.5, mamwe mabhugi akagadziriswa, saizi yakadzikiswa ne39 MB nekubvisa zvimwe zvikumbiro zvakaiswa nekutadza, nezvimwe.
Ndizvozvo kusvikira kuburitswa kutsva kwakarongerwa iyo 9 yeJuly kana pasina kunonoka, chinova chitsva Miswe 3.15 iyo iri kusimukira parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » TAILS 3.14 - Iine zvigadziriso zveazvino Intel kusagadzikana
Wi-Fi Alliance uye SD Association zvakare inoputsa hukama neHuawei